"UTim Cook othandekayo", ukugxekwa kweApple kwelona phephandaba libalulekileyo eJamani | Ndisuka mac
Ukubeka kwimeko umba opheleleyo wokubaleka kwirhafu owenziwa yiApple eYurophu (kwaye egxekwa ngokubanzi), kunye nogonyamelo olubangelwe ligama lenkampani esekwe eCupertino kwi «Amaphepha eParadesi», Ndivela eMac sikuzisa isicatshulwa sekholamu enomdla ebhalwe kule veki ngu UWolfgang Krach, umhleli oyintloko we Iphephandaba laseMzantsi Afrika, Elona phephandaba laziwa kakhulu kwilizwe eliphambili le-European Union, eJamani.
Ngale leta ivulekileyo, inesihloko "UTim Cook othandekayo", Kujongwe ukubonisa umfanekiso ukuba uninzi lwabantu baseYurophu kwimeko yokubaleka kwe-Apple kwilizwekazi elidala. Indawo enomdla ngokwenene. Ileta ifundeka ngolu hlobo lulandelayo:
UTim Cook othandekayo,
Awundazi, kodwa ndiyakwazi. Hayi buqu, kodwa kumabonwakude, phila imijelo yokubonakala kwakhe eCupertino njengoko esenza amanqaku aphambili, kwaye kunjalo, kwiphephandaba lombutho kunye nakwiwebhusayithi. Ndingumhleli oyintloko weSüddeutsche Zeitung, iphephandaba eliphambili lemihla ngemihla laseJamani kunye nelo ndafumana iPanama Papers ndaza kamva ndafumana iPhepha leParadesi.amaxwebhu esiqhubeka nokuhlalutya kwaye sinika ingxelo kuwo noogxa beNew York Times, The Guardian, kunye neminye imibutho yeendaba eli-100.
Eyakho yenye yeenkampani ezidumileyo nezidumileyo emhlabeni. Iimveliso zakho zibalasele. I-iPhone ayitshintshanga nje kuphela kwihlabathi, ikhawuleze kakhulu kunayo nayiphi na enye itekhnoloji kwimbali. I-Apple iyathandwa zizigidi zabantu kwaye iphumelele imeko yehlelo. Ngokwam, ndine-iPhone kule minyaka ili-10 idlulileyo. Iminwe yam ibrasha i-iPad yam yonke imihla. Ekhaya, iMacBook ilindele. Ukuba wonke umntu kwigumbi lethu leendaba kufuneka akhethe phakathi kwekhompyuter yomsebenzi kunye ne-smartphone, ndiqinisekile ukuba uninzi lwabantu luya kwisixhobo seApple.
Oogxa bam kunye nam kudala silandela iingxoxo eMelika naseYurophu malunga neerhafu zeApple. Wena, ngokwakho, uhlala uthatha indawo kulo mbandela, njengoko wenzayo phambi kweNdlu yeeNgwevu yase-US ngo-2013. Ngelo xesha, wawuthe iApple "ayixhomekekanga kumaqhinga erhafu." Nangona kunjalo, "kwiiPhepha zeParadesi" sifumanisa ulwazi olungcolisa umfanekiso we-Apple ozama ukuyidlulisa. Imibuzo ebuzwe yi-Süddeutsche Zeitung kunye noogxa bethu abakhankanywe ngasentla bashiywe bengaphendulwanga okanye kuye kwahlangatyezwana nabo, ngeyona ndlela, yimilomo emilebe. Ngoba?
U-Apple usebenzisa amawaka eenjineli ezibalaseleyo, abaqeqeshiweyo, amagqwetha, abaphathi, kunye neengcali kwezonxibelelwano noluntu abaye kwiikholeji nakwiiyunivesithi kwihlabathi liphela. Uninzi lwala maziko emfundo aphakamileyo axhaswa ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye ngemali yomrhafi. I-Apple izuza ngokuthe ngqo kwiziseko zophuhlisoimfundo okanye hayi, egcinwa ngamazwe. Umnumzana Cook, kutsha nje uxelele iNew York Times ukuba iApple "inoxanduva lokuziphatha" hayi ukunceda uqoqosho lwaseMelika lukhule kuphela, kodwa "negalelo nakwamanye amazwe esishishina kuwo."
Ewe siyazi ukuba iApple lelona galelo likhulu eMelika. Kodwa kuthekani ngomphandle?
Inkcazo-ntetho ibonisa ukuba phakathi ko-2010 no-2017, ngokomndilili, I-Apple ivelise isibini kwisithathu seenzuzo zayo ngaphandle kwe-US. Ngokucacileyo, wenza i-41.1 yezigidigidi kwi-2016 kunye ne-44.7 yezigidigidi zeedola kwi-2017 Ukusukela ngo-2010, ingeniso efumanwe phesheya sele irhafisiwe kwinqanaba eliphakathi kwe-1 ne-7 yepesenti yeApple. Mnu. Cook, ucinga ukuba oku kuyahambelana "noxanduva lokuziphatha" olukhankanyileyo? Olo "ncedo lwerhafu" - nangona lusemthethweni - Inokwenzeka kuphela kuba iifemu ezikhethekileyo zomthetho ezinje nge-Appleby uyilo lweenkampani ezintsonkothileyo ezingenakufikeleleka kwezinye iifemu.. Abasebenzi abanezakhono, abanini bamashishini abancinci, kunye nabasebenzi kumazwe amaninzi angaphandle kwe-US, uninzi lwabo ngokuqinisekileyo olusebenzisa iimveliso zeApple, abanandlela yokubaleka irhafu eqhelekileyo.
EJamani, iApple (engawapapashiyo amanani ngqo) kuqikelelwa ukuba yavelisa ingeniso kumawaka ezigidi kunyaka ophelileyo, apho ihlawule i-25 yezigidi zeerandi kwirhafu. Ngamanye amagama, kuphela yi-0.2% yeerhafu i-Apple ehlawulwe kwihlabathi liphela ephele apha. Oku akunxulumene nokude kude nepesenti yentengiso yehlabathi kunye neenzuzo ezibhalwe ngu-Apple eJamani. Ndiqinisekile ukuba ungabuxabisa ubunzima esinabo ekucaciseni oku kubafundi bethu.
Kodwa eyona nto indixhalabisayo yindlela u-Apple ayalele ngayo inkampani yomthetho ukuba ifumane "isiqinisekiso esisemthethweni sokuxolelwa kwirhafu" kurhulumente wesizwe. Kuba uyayifuna lonto? Kutheni uziva ugunyazisiwe ukuba ungayihlawuli irhafu kwilizwe? Ngaba ubufuna iwonga lerhafu ukuba ibe yimeko ephambili yokuseka indawo yokuhlala apho? Yintoni ekunika ilungelo lokuyenza?
Kwaye kukuphi ukuqonda kwedemokhrasi ekufuneka sikuqonde kumbuzo ekubuzwe yile femu? Malunga nokuba ilizwe "lineqela eliphikisayo elithembekileyo" okanye "intshukumo enokuthi ithathe indawo yorhulumente okhoyo"? Ngaba wayezama ukuqinisekisa ukuba ungagcina imeko yakho yokungahlawuli rhafu kwanasemva konyulo okanye utshintsho kurhulumente?
Yiyo loo nto uMnu Cook, iSüddeutsche Zeitung kunye nabafundi bethu besalinde iimpendulo kwimibuzo emininzi. I-Apple iyazibhengeza njengenkampani esekuhleni. Ukuba oku kuyinyani, ke akukho sizathu sokuba uthule, ngaba akunjalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » "Othandekayo uTim Cook", ukugxekwa kweApple kwelona phephandaba libalulekileyo eJamani